Afaka mampiasa iPhone ianao izao hiteraka lakile fiarovana amin'ny Google | Vaovao IPhone
Toa lasa lamaody ny fiarovana lafin-javatra roa. Andro vitsy lasa izay dia tsy maintsy namboariko ity fiarovana roa sosona ity tamin'ny iPhone mba hidirako amin'ny tranokalan'ny bankiko. Raha miditra amin'ny Mac aho, ohatra, dia tsy maintsy manana iPhone mora ampiasaina aho hiditra amin'ny tranokalan'ny bankiko.
Afaka manao zavatra mitovy amin'ny tranokalan'ny Google ianao. Azonao atao izao ny manamboatra ny rafitra hanamarinana amin'ny alàlan'ny ID ID na Touch ID amin'ny findainao, na dia miditra amin'ny solosaina aza ianao. Miezaha tsy ho lany bateria….
Miaraka amin'ny fanavaozana vaovao an'ny rindrambaiko Smart Lock iOS an'ny Google dia azonao atao ny manefy ny iPhone na iPad anao lakile fiarovana ho an'ny fanamarinana singa roa. Izy io dia miasa amin'ny serivisy Google zanatany amin'ny alàlan'ny browser Chrome.
Raha vao voalamina ao anaty fampiharana ilay fampiasa, rehefa manandrana miditra ao amin'ny Google amin'ny alàlan'ny browser Chrome amin'ny fitaovana rehetra, fampandrenesana mandeha ho azy dia alefa amin'ny iPhone-nao manakana
Tokony hamaha ny iPhone na ny iPad amin'ny ID ID na Touch ID ary hamafiso ny fidirana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Smart Lock mba hanohizana ny asany amin'ny fitaovana hafa.
Aorian'ny fametrahana ny app amin'ny iPhone dia angatahina ny kaonty google anao hampifandina ny lakilen'ny fiarovana. Araka ny Google, mampiasa ny hardware an'ny Secure Enclave an'ny Apple ny fampiharana, izay toerana itehirizana soa aman-tsara ny Touch ID, Face ID, ary angona cryptographic hafa.
Ny fampiharana dia mitaky ny fampiasana Bluetooth amin'ny alàlan'ny iPhone sy ny fitaovana hafa mba hiasa ireo lafin-javatra roa, ka mila somary akaiky izy ireo. Ity rafitra ity dia manome ny jiro maitso amin'ny alàlan'ny Bluetooth, ary noho izany tsy sivana amin'ny alàlan'ny Internet.
Google Smart Lock dia efa azonao ampiasaina amin'ny iPhone sy iPad ao amin'ny Fivarotana fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Afaka mampiasa iPhone ianao izao hiteraka lakilen'ny fiarovana ao amin'ny Google
Podcast 11x18: Angano Angano CES